Zlatan oo wacdaro ka dhigay garoonka Friends - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cayaaryahanka caanka ah Zlatan Ibrahimovic. Sawirle: Christine Olsson/Scanpix
Zlatan oo wacdaro ka dhigay garoonka Friends
La daabacay torsdag 15 augusti 2013 kl 10.47
Cayaaryahanka caanka ee kubbadda cagta Zlatan Ibrahimovic ayaa xalay wacdaro ka muujiyey garoonka weyn ee Friends Arena, kadib markii uu saddex gool ka dhaliyey kooxda qaranka Noorwey oo halkaas tartan ku dhexmaray.
Cayaartu markii ay socotay wax hal daqiiqo ka yar ayuu Zlatan kubbad uu u soo laaday Sebastian Larsson goolka Noorwey gudaha u dhigay.
– Waxaan jeclahay in aan kooxda qaranka caawino oo aan gool u dhaliyo. Waana waxa aan mar walba ku fekero. Maantana waa ku guuleystey. Waxaan dareemay inaan khatar noqon karo, sidaas awgeed ayaan u dhowaadey dhanka goolka Noorwey oo ah meeshii aan damacsanaa, ayuu yiri Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan wuxuu dadkii daawanaayey oo tiradooda lagu qiyaasay 13000 oo qof geliyey farxad iyo sawaxan kadib markii uu goolkii labaad dhaliyey. Kubbaddas oo ay si xallad leh ugu dhigeen cayaaryahannada Albin Ekdal iyo Johan Elmander.
Kooxda Noorwey ayaa cayaartu markii ay socotay cabbaar heshay rigoore kadib markii cayaaryahan iswiidhish ahi hoos u riixay cayaaryahan noorweyjiyaan ah.
Kadib Noorwey ayaa goolkii labaad dhalisay daqiiqado ka hor intaan nasashada loo bixin. Markii dib la isugu soo noqdey ayey kooxda Iswiidhen dhalisay laba gool oo midkood dhaliyey Zlatan. Cayaartiina waxay ku dhammaatay 4-2 oo Iswiidhen ku badisey. Sidaas ayuuna Zlatan ugu dhaliyey kooxda qaranka 44 gool intii uu u cayaarayey. Wuxuuna galay kaalinta labaad oo cayaaryahanka keli ah oo ka goolal badnaa wuxuu noqonayaa Sven Rydell oo isagu intii uu kooxda qaranka u cayaarayey u dhaliyey 49 gool.